SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲစပိန်ဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲစပိန်ဝေငှ
1. အဆက်, သင်သည်သင်၏ကဒ် SanDisk လွန်ကဲနှင့်အတူလက်ခံရရှိသောကူပွန်ကို Select လုပ်ပါ.
>>>>ကောင်စီ: သင့်ရဲ့ကူပွန်RescuePRO®သို့မဟုတ်RescuePRO® Deluxe ပြောနိုင်; သင့်လျော်သောအဖြစ်ရွေးချယ်စရာတွေထဲကရှေးခယျြ.
**** သငျသညျRescuePRO® SSD ကိုတစ်ကူပွန်ရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ2. သင်၏ operating system ကိုရှေးခယျြဖို့ခလုတ်အောက်တွင်တည်ရှိရွေးချယ်ထားကူပွန်တဦးကိုရွေးချယ်ပါ.3. Lea မှာ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် ညွှန်ကြားချက်က၎င်း၏အမှတ်စဉ်အရေအတွက်အားဖြင့်တစ်ဦး activation code ကိုရယူရန်အဘို့အ RPRID.** အာရုံစူးစိုက်မှု: သင်နှင့်အတူစတင်မယ့်အမှတ်စဉ်နံပါတ် RescuePro Deluxe များအတွက်ကူပွန်ရှိပါက RPRID-0305,
လင့်ခ်ကနေတဆင့် SanDisk ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ တစ်မှန်ကန်သောအမှတ်စဉ်အရေအတွက်ကိုရရှိရန်.
ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်နံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ထားပါတယ်.သင်သည်သင်၏နံပါတ်စဉ်အသိပေးသင့်ပါတယ် RPRID-0305 လုံးဝကအစားထိုး SanDisk. **
Si usted utiliza Windows XP, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ para obtener una versión compatible con XP de RescuePRO® Standard o ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ para obtener una versión compatible con XP de RescuePRO® Deluxe.